Bahrain: Nosamborina tamin’ny fomba feno herisetra ilay bilaogera Zainab Al-Khawaja · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Nosamborina tamin'ny fomba feno herisetra ilay bilaogera Zainab Al-Khawaja
Voadika ny 04 Marsa 2019 6:46 GMT
Polisy vavy mitazona an'i Zainab Al-Khawaja rehefa avy namatotra ny tanany.
Nosamborina tamin'ny fomba feno herisetra tamin'ny alakamisy ilay bilaogera Bahrainita, Zainab Al-Khawaja, zanakavavin'ilay mpanohitra malaza sady mpikatroka ny zon'olombelona, Abdulhadi Al-Khawaja, izay voasazy higadra mandra-pahafatiny tamin'ny volana jona 2011 lasa teo. Nitranga ny fisamborana azy taorian'ny fahafatesan'ilay lehilahy 22 taona antsoina hoe Ali Al-Gassab maty voadonan'ny fiara, “lozam-pifamoivoizana” izay toa mateti-pitranga hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana tany Bahrain tamin'ity taona ity. Taorian'ny nahafatesan'i Al-Gassab, niparitaka antserasera avy hatrany ny vaovaon'ny fisamborana an'i Zainab. Nohamafisin'ny filohan'ny Foibe momba ny Zon'olombelona ao Bahrain, Nabeel Rajab sy ny rahavaviny Maryam Al-Khawaja izany. Tamin'ny fisamborana azy, dia i Zainab 28 taona, renim-pianakaviana manan-janaka 2 taona no mpikambana fahaefatra ao amin'ny fianakaviany voasambotra nanaraka ny rainy, ny zaodahiny sy ny vadiny. Niloa-bava hatrany manohitra ny fitondrana izy, indrindra amin'ny alàlan'ny kaontiny Twitter izay ampiasainy handefasana vaovao farany avy amin'ny hetsi-panoherana izay nanozongozona ny fireneny nanomboka tamin'ny 14 febroary.
Tao amin'ny Twitter, nanoratra ny mpiserasera fa tamin'ny fisamborana an'i Zainab, dia nihirahira mafy manohitra ny mpanjaka Bahrainita Hamad Al Khalifa izy, nihiaka hoe “Miala i Hamad.” Ity horonantsary manaraka niely tao amin'ny YouTube ity dia mampiseho an'i Al-Khawaja nofatoran'ny polisy vavy iray. Avy eo, nisy polisy vavy iray hafa tonga ary nidaroka an'i Zainab teo amin'ny tarehiny alohan'ny nitondrana azy tao amin'ny fiaran'ny polisy.
Nosamborina i Zainab raha nipetrapetraka teo amin'ny fiolanan-dalana tao amin'ny Araben'i Budaiya, anisan'ny sit-in antsoin'ireo mpanao fihetsiketsehana hoe “Bodoy ny Arabe Budaiya” izay mikendry ny hanerena ny governemanta hamotsotra ireo gadra politika ary hanome voninahitra ireo maritiora 40 mahery maty novonoina teo am-pelatanan'ny mpitandro filaminana hatramin'ny nanombohan'ny fitroarana .
Araka ny voalazan'i Maryam rahavaviny, nosamborina niaraka tamin'ny vehivavy iray hafa antsoina hoe Masooma Al-Sayed i Zainab ary voampanga ho nanao fivoriana tsy ara-dalàna, manompa vehivavy manamboninahitra, ary mitarika fankahalàna ny fitondrana. Nanapa-kevitra hihazona azy roa vavy mandritra ny fito andro ny mpitandro filaminana mba hanaovana fanadihadiana azy ireo. Notifirina zavatra ny mason'i Zainab tamin'ny nisamborana azy ary tsy afaka nahita nandritra ny adiny iray izy. Tao amin'ny paositry ny polisy, nodarohana teo amin'ny lohany, ny sandriny sy ny tongony i Zainab satria tsy afaka nahita. Fantany ny feon'ilay polisy vavy nidaroka azy, saingy tsy nety nanoratra izany ny mpampanoa lalàna. Niezaka nampiseho ny lahatsary misy ny fisamborana an'i Zainab tamin'ny mpampanoa lalàna ny mpisolovavany, saingy tsy nety nijery izany izy. Tonga tao amin'ny mpampanoa lalàna niaraka tamin'ny sandry naratra notapenana lamba ilay polisy vavy, ary nilaza fa nidaroka azy i Masooma sy Zainab. Tsy nety nanasonia ny fanambarana i Zainab raha tsy soratana ny anaran'ilay polisy vavy izay nidaroka azy.